ढँडार मष्टोको अन्नत चतुर्दशी पर्व
भदौको अनन्त चतुर्दशीका दिन सुदूर तथा मध्यपश्चिमको हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, जुम्ला, अछाम, दार्चुला, डोटी, डडेल्धुरा, कालीकोटका विभिन्न देवताका देवस्थलहरूमा ठूला जात्रा हुनुका साथै महत्वपूर्ण पर्वको रुपमा मनाइन्छ । आसपासका मानिसहरू जति व्यस्त भए पनि कामधाम छोडेर मेला आयोजना हुने स्थलमा जम्मा भई देवताको पूजा गरी जात्राको मनोरन्जन लिन्..
इन्जिनियर ठूलो कि शाखा अधिकृत ?
घटना–१ , मिति – २०७३ भदौ १७ सशस्त्र प्रहरी बल राजश्व तथा भन्सार सुरक्षा गुल्म डण्डा भैरहवा..
नेपाली राजनीतिमा अभिभावकको खाँचो छ
आफ्ना नागरिकहरुलाई बेवास्ता गरेर आफ्नै मात्र दुनो सोझ्याउन ध्यान दिने, देशका अभिभावक अन्तत..
यस कारण अध्यक्षमा मेरो दावेदारी : उमा अधिकारी रेग्मी, अध्यक्षको उम्मेदार, नेपाल महिला संघ
काँग्रेसले प्रजातन्त्रको लागि लामो लडाईं लडेको छ । देशमा राणाहरुले शासन गरे । उनको जहानिया..
कहिले पुग्छ समृद्धिको लाभांश ?
मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै विकास र समृद्धिको कुरा चर्को रुपमा उठ्न थालेको छ । अहिले ..
यसकारण मेरो उम्मेदवारी : मीना पाण्डे, महिला संघ अध्यक्षका उम्मेदवार
मैले महिला संघको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकी छु । नेपालमा जनसंख्याको हिसाबले पनि महिला धेरै छन् । यहाँ राजनीतिक दल स्थापनाकालदेखि महिलाको राजनीतिमा सहभागिता हुँदै आएको लामो इतिहास छ । राजनीतिक अधिकारको लडाइँमा पनि महिलाले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउँदै आएका छन् । चाहे त्यो राणाविरोधी आन्दोलन होस् । चाहे पञ्चायतविरोधी । चाहे गणतन्त्र ..
दिल्लीबाट प्रचण्ड फर्केपछि ओलीको बोली कस्तो होला ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बिहीबारदेखि भारतको भ्रमणमा जानुहुने भएको छ । भारत भ्रमणको प्रतिक्षित मिति भदौ ३०को दिनसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतमा पुगेर कस्ता काम गर्न हुन्छ र कस्ता काम गर्न हुन्न भनेर विभिन्न कोेणबाट सुझावहरु आइरहने छन् । प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि अविश्वास नगर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आउनुभएको छ । भारत..
व्यङ्ग्य : पहाडे–राष्ट्रवाद बचाउन ‘लाहुरे–पेटी’
आकाशको सूर्य रापिलो छ अचेल । बादल भएनभने चरक्क पोल्छ र पसिना तर्तरी झार्छ । यता सूर्य छापका एमालेहरु भने सत्ताबाट बाहिरिएपछि चिसा भएका छन् । चिसोले निमोनिया भएझैं केही त बर्बराउन थालेका छन् । केही दिन अगाडि दङ्गेली पोखरेलले ‘काला’ प्रसङ्ग निकालेर ‘भँडास’ फाले । त्यसअघि अछामी भीम रावलको ‘फन्टुसी’ तर्क पनि सुनिएकै हो […]
होश गरेर बोल्नुहोला है झलनाथ कमरेड
कमरेड खनाल, खुसी, खोकी, प्रेम र राजनीतिक अपराध धेरै दिन छोप्न सकिँदैन । दस महिनापछि प्रेमको पोको भुइँमै झर्छ । तपाईंका सकारात्मक पक्ष छन् तर नकारात्मक पक्ष पनि पंक्तिकारले देखेको छ । भदौ २६ गते गुटगत गतिविधि गरेर पार्टी विभाजन गर्न खोजिँदै छ भनेर एक कार्यक्रममा तपाईंले भनेको कुरा अखबारमा आएको छ । यो कुरा […]
मन्त्रीहरुको चर्चित हुने घातक होडवाजी
अहिले नेपालमा नेताहरुको ‘लोकप्रिय’ हुने अभियान चलिरहेको छ । विगतमा पदमा बसेका नेता, खासगरी मन्त्री प्रधानमन्त्री कोही पनि लोकप्रिय बन्दैनथे, अलोकप्रिय भएर पदबाट विदा हुन्थे । मन्त्री होउन् या प्रधानमन्त्री, कसरी जनतामाझ लोकप्रिय हुने, कसरी चर्काे हल्लाखल्ला हुने, सामाजिक संजालबाट धेरै समर्थन पाइने कार्यक्रम घोषणा गर्ने भन्ने ध्य..
दुई वर्षअघि २६ र २७ नोभेम्बरमा नेपालले आयोजना गरेको सार्क शिखर सम्मेलनले दक्षिण एसियाको शान्ति र समृद्धिका लागि के त्यस्तो उल्लेखनीय निर्णय गर्‍यो भनेर सोध्ने हो भने धुरन्धर कूटनीतिज्ञले पनि ठ्याक्कै याद भएन भनेर उत्तर दिनेछन् । तर, राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित भव्य उद्घाटन समारोहको अन्तमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस..
यसकारण स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रस्ताव मधेसविरोधी
सरकारले चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । वर्तमान सरकार स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नकै लागि गठन भएको प्रचारबाजीको आधारमा यो कुरा आउनु स्वाभाविक हो । तर स्थानीय निकायको निर्वाचन कसरी गर्ने ? स्थानीय निकाय गठनको आधार के हुने ? जस्ता विषयहरु हल गर्न जरुरी छ । यसअघिको सरकारले गठन गरेको स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आय..
यसरी गरौं स्थानीय तहको पुनर्संरचना
स्थानीय निकाय पुनः संरचना आयोगले जसरी ५६५ सङ्ख्या तोकर स्थानीय निकाय पुनः संरचा गर्न भनेको छ, यो ठीक छैन । आयेगले जसरी तोकेर पठाएको छ स्थानीय तहको पुनः संरचना गर्न भनेर यो निर्दिष्ट खालको भयो । यो प्रोसेस बटम अफ हुनुपथ्र्यो । तर यहाँ त निर्देशनात्मक भयो । यसलाई व्यापक छलफलको विषय बनाउनुपथ्र्यो । कुन […]
हिजो के गरे दार्चुलाका स्थानीय विकास अधिकारी रायमाझीले ?
सधैँझैँ बिहान ५ः३० मा उठेँ । पानी खाएर फ्रेस भएँ । कोठा नजिकै मालिकाजुर्न मन्दिर छ । त्यहाँ गएर पूजा पाठ गरेँ । बिहान जिल्ला शिक्षा कार्यलयमा शिक्षा दिवस कार्यक्रम थियो । अर्को साक्षरता दिवस पनि थियो । यी दुवै कार्यक्रम एउटै ठाउँमा थिए । म यी दुवै कार्यक्रममा सहभागी भएँ । यसको आयोजना जिल्ला […]
यसरी हुँदै छ महिला संघको महाधिवेशन (प्रवक्तासँगको कुराकानी)
काँग्रेसको भ्रातृ संघ नेपाल महिला संघको महाधिवेशन भदौ २९ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुँदै छ । नेविसंघको महाधिवेशन पट्यारलाग्दो भए पनि महिला संघले निर्धारित समयमै सक्ने तयारी गरेको छ । यही विषयमा संघका केन्द्रीय सदस्य एव्म प्रवक्ता निर्मला क्षेत्रीसँग गरिएको छोटो कुराकानीको अंश । ० नेपाल महिला संघको महाधिवेशनको तयार..
यसरी सम्भव छ– व्यवस्थित बसोवास
नयाँ बस्तीको अर्को एक महत्वपूर्ण पक्ष भनेको व्यवस्थित बसोवास हो । हामी आज जहाँ जे–जसरी बसोवास गरिरहेका छौंं, त्यसमा केही हेरफेरको आवश्यकता पक्कै छ । २०७२ को भूकम्पका समयमा जे–जति धनजनको क्षति भयो, त्यसको सम्पूर्ण कारण कमजोर संरचनामात्र नभएर अव्यवस्थित बसोवास पनि हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । विगतमा थोरै क्षेत्रफलभित्र ढुंगामाट..
चुच्चे रेलले तोडेको सम्बन्ध
झिसमिसे अँध्यारोमै क्याम्प जागेको छ । धुलाम्य रूखमा चराचुरुङ्गीहरूको चिरबिर अनि मान्छेहरूको गाइगुइँले क्याम्प कोलाहल छ । निला ड्यान्ग्री सेफ्टी जुत्ता अनि एउटा हातमा टिफिन र अर्कोमा हेल्मेट बोकेका योद्धाहरू यो देश र आफ्नो भविष्य बनाउने युद्धमा होमिनका निम्ति तयार हुन्छन् । नेपालमा जस्तै टाटा बसको हर्न बज्छ । एकछिनलाई सबैमा बालाप..
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुष्पलालको योगदान
परिचय विश्व साम्यवादी आन्दोलन माक्र्सवाद लेनिावादबाट अनुप्राणित छ । त्यसैले समाजवादी साम्यवादी विश्वको अध्ययनको केन्द्रविन्दु नै माक्र्सवाद लेनिनवाद हो । कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेख्नुपूर्व नै माक्र्सले समाजवादी दर्शनको अध्ययन विश्लेषण गरिसक्नुभएको थियो भने माक्र्स उदाउनुपूर्व नै थप्रै चिन्तन मनन र प्रयासहरू भएका थिए । प्लेटो, थोमस..
डा. केसीको भाडभैलो : धरासायी बन्दै शिक्षण अस्पताल
डा. गोबिन्द केसीको बारम्बारको आन्दोलनका कारण राज्यको पूर्ण लगानीमा सञ्चालित त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज अस्तव्यस्त बन्दै गइरहेको छ । कुनै दिन दक्षिण
प्राकृतिक सुन्दरता नै सम्पन्न नेपालीको आधार
प्राकृतिक सुन्दरतामा नेपाल विश्वका धनी देशको कोटिमा पर्छ । प्राकृतिक सौन्दर्यताको अवलोकन र उच्च शिखरहरु चढ्ने रोमाञ्चकतालाई सहज र सुलभ बनाउँदै विश्वका मानिसलाई आकर्षित गर्नसक्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र सबल र एउटा धनी देशका रुपमा हरेक जनताले गर्व गर्न पाउने थिए । पर्यटनले आर्थिक क्षेत्र सबल भएको उदाहरणका रुपमा बेलायतलाई लिन सकिन्..
नयाँ शक्तिमा ‘नयाँ माक्र्सवाद’ को बहस !
माक्र्सवाद जडसूत्रवाद होइन, सिर्जनशील विज्ञान हो । स्थानविशेष, समयसापेक्ष रूपमा यो सिद्धान्त लागू हुने गर्छ । माक्र्सवादी विज्ञानको रक्षा, प्रयोग र विकासको विभिन्न रूपमा नयाँ शक्तिले त्यो सिद्धान्तलाई प्रयोग गरिरहेको छ । मानिसले मानिसमाथि गरिने सबै प्रकारका दमन, शोषण, उत्पीडन र विभेदबाट उन्मुक्ति पाउने मुक्तिको सिद्धान्त नै माक्..
राजनीतिमा मूल प्रवाहप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नेलाई वामपन्थी र सकारात्मक दृष्टिभाव राख्नेहरूलाई दक्षिणपन्थी भनिन्छ । विकासक्रमसँगै शब्दार्थ परिमार्जित, विस्तारित र अनेकार्थी हुन सक्छन्, वामपन्थी र दक्षिणपन्थी शब्दको अर्थ पनि सुरुवाती समयको भन्दा व्यापक र विस्तार भएको छ । पछिल्लो समयमा खासगरी माक्र्सवादको जन्मपश्चात् धर्म, स..
महतोज्यू, अब अपराधीका लागि पनि आन्दोलन ?
६ महिना लामो मधेस आन्दोलनबाट स्वघोषितरुपमा मधेसको ठेकेदार बनेका राजेन्द्र महतो र उनकै नेतृत्वमा रहेको सदभावना पार्टीले आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका वीर सपूतहरुको भावनासँग खेलवाड गर्दैछ । मधेसको मागको लागि थप उर्जा लगाउनु पर्ने ठाउँमा एउटा आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिको रिहाईको लागि नारा, जुलुस र आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु दुर्भा..
यतिबेला फेरि दक्षिणतिरको छिमेकी देश भारतले नेपालविरुद्ध शत्रुतापूर्ण व्यवहार देखाउन थालेको छ । नेपालमा संविधानसभाले निर्माण गरेको भारतको भन्दा धेरै लोकतान्त्रिक र समावेशी चरित्रको संविधानमाथि नकारात्मक दृष्टिकोण बनाएर भारतीय शासकहरूले भ्रम फैलाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । नेपालप्रति भारतको नकारात्मक धारणा बन्नुको कारण के हो ? यो ..
१३ वर्षपछि भटेको कामरेड झन् भुत्ते
संवत् २०५९ सालमा म ११ वर्षको थिएँ । घरनजिकैको मस्टेश्वर माध्यमिक विद्यालय गगुडामा कक्षा ६ मा पढ्थेँ । उमेर र ज्यान दुवैका हिसाबले म सानो थिएँ । त्यो समय माओवादी द्वन्द्व चर्किएको थियो । कम्मरमा खुकुरी भिरेका प्रस्ट नेपाली बोल्ने माओवादी कार्यकर्ता जता देख्यो त्यतै हुइँकिन्थ्यौँ हामी । स्कुले भुराहरूबीचमा म पनि दौडिएको सम्झना ताज..